मेयरको टिकट पाएका काँग्रेस चर्चित नेता कुटिए, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
मेयरको टिकट पाएका काँग्रेस चर्चित नेता कुटिए, को हुन् उनि ?
गोरखा। गोरखामा मेयरको टिकट पाएका काँग्रेस नेता विश्वदेव श्रेष्ठमाथि कुटपिट भएको छ। गोरखा नगरपालिकाका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयर पदको टिकट पाएका विश्वदेव श्रेष्ठमाथि कांग्रेसकै असन्तुष्ट कार्यकर्ताले हातपात गरेका पीडित श्रेष्ठले बताएका छन्।
उनी आजै सोमबार उम्मेदवारी दर्ताका लागि फोटो खिचाउन फोटो स्टुडियो गएका थिए। स्टुडियो भित्रै उनीमाथि कुटपिट भएको हो।
काँग्रेसकै अहिलेका मेयर राजनराज पन्त पनि दोस्रो कार्यकालका लागि मेयरको आकाङ्क्षी थिए। मेयर पदको टिकट बाँडफाँटप्रति त्यहाँ काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
त्यस्तै, गठबन्धनकातर्फबाट कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। जावलाखेलस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सोमबार दिउँसो उनले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्।
गठबन्धनमा कांग्रेसले ललितपुर महानगरमा प्रमुख पाएको थियो। जस कारण उनले मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ललितपुर मेयरमा निर्वाचित महर्जन फेरि दोहोरिन खोजेका हुन्।
उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले महानगरपालिकामा गर्नुपर्ने कामहरू अझै रहेकाले आफूलाई निर्वाचित गराउन आग्रह गरे।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको मेयरमा युवा नेता विष्णुकुमार भामले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । भामले आज मेयरमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।
कांग्रेसबाटै उपमेयरमा ऐश्वर्य शाही मल्लको पनि मनोनयान दर्ता भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । सदरमुकाम गमगढी बजारमा बाजागाजासहित बजार परिक्रमा गर्दै उनीहरूले मनोनयान दर्ता गराएका हुन्।
यस्तै, कांग्रेसकै बागी उम्मेदवारमा खुम्मेनी बिकले पनि उपमेयरमा मनोनयन दर्ता गराएकी छन्। ठूला दलमध्ये मनोनयन दर्ता गराउने नेपाली कांग्रेस पहिलो भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मुगुका सहायक निर्वाचन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी प्रकाश थापाले जानकारी गराए।
उनका अनुसार नेकपा एमालेबाट मेयरमा डम्बरबहादुर रावल र उपमेयरमा टोमा लामा पनि उम्मेदवारी मनोनयनको तयारीमा छन् । एमालेका नेता कार्यकर्ता पनि बाजागाजासहित मनोनयान दर्ता स्थालमा पुगेका छन्।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतका दलले सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गर्ने क्रम जारी रहेको छ।
केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालयको कार्यतालिका अनुसार ११ र १२ वैशाखमा दलहरूले मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोके पनि यहाँका सत्ता गठबन्धनका दलहरू र प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पहिलो दिन मनोनयन गराए।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले घरेलु मदिराको व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेकपा एसले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चुनवाी घोषणापत्रमा उक्त प्रतिवद्धता जनाएको हो।
नेपाली घरेलु मदिरा, विभिन्न खाद्यपदार्थबाट बनेका जाँड तथा छ्याङ नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुले रुचीपूर्वक सेवन गरेकोले यस्ता माल–वस्तुको व्यवस्थित तरिकाले उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउनु आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा औंल्याइएको छ।